Italiana renivohitra dia andro firavoravoana ho an'ny maso. Avy amin'ny dingana espaniola mankany amin'ny loharano Trevi, tsy ho aiza na aiza ianao tsy ho voaroan'ny mahatalanjona trano. Raha izay tsy ampy, ny sakafo mendrika slavering ny. Tanana paty gelato vies amin'ny vaovao sy ny ombidia mozzarella tonga mivantana avy amin'ny toeram-pambolena.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Eoropa farany ho an'ireo vao manomboka” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/europe-train-trip-beginners/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)